Shirwaynihii 6,aad Ee Waxbarashada Heer Deegaan Oo Furmay - Cakaara News
Shirwaynihii 6,aad Ee Waxbarashada Heer Deegaan Oo Furmay
Jigjiga(CN) Talaado 8dii September 2015, Waxaa hoolka shirarka ee Machadka Maaraynta DDSI kafurmay shirwaynihii 6,aad ee waxbarashada heer deegaanka oo ah shirwayne sanadkiiba hal mar laqabto. Shirwaynahan ayay ka soo qaybgaleen madaxwayne ku-xigeenka ahna wasiirka waxbarashada DDSI, gudoomiyeyaasha gobolada, kuwa degmooyinka, madax-xafiiseedyada waxbarashada degmooyinka iyo masuuliyiin kale.
Waxaa furitaankii shirkan ka hadlay Madaxwayne ku-xigeenka ahna Wasiirka Waxbarashada mudane Mawliid Haayir Xasan oo si qoto dheer uga warbixiyay jihooyinka iyo istaraatiijiyadaha u dajisan xukuumada ee ku aadan dhinaca waxbarashada. Waxaa kale oo uu Madaxwayne ku-xigeenku intaa raaciyay in qorshaha GTP2 xooga la saarayo dhanka waxbarashada si loo tir tiro jahliga loona xoojiyo cudud waxbaratay oo tiro iyo tayaba leh.
Hadaba shirkan oo socon doona mudo laba maalmood ah ayaa lagu falanqayn doonaa qaabkii loo meel marin lahaa qorshayaasha waxbarashada ee sanadka 2008TI. Iyadoo lagu ogaan doono heerarka kaladuwan ee dhanka tayada, tirada, nidaamka baris-barasho, kaqaybgalka bulshada ee degmo waliba ka marayso waxbarashada.